Zavatra voalohany tapahan'ny Filan-kevitry ny minisitra vao manomboka ny taona ireo daty tsy hiasana rehetra, jour ferié. Anjaran'ny ministera tsirairay amin'izay ny mandrindra ny tetiandrony mifanaraka amin'izay.Ekena fa manaraka ny fiposaky ny volana no amaritana ny andro fety tsy iasana ho an'ny havana Silamo, fa tsy mifanalavitra be akory fa ora vitsy no mety mampiova azy. Isika eto Madagasikara araka ny tantara dia nandray ny calendrier grégorien, izay pape katolika i Grégoire, izany hoe kalendrier Katolika no mitondra ny tetiandrontsika, satria ny Protestant, izay Kristianina, dia tsy mankalaza ny Assomption, fiakaran'i Masina Maria renin'i Jesoa Kristy any an-danitra. Nefa ny BEPC dia nalatsaka ao anatin'ny fety Silamo ny Talata 20 jolay ho avy izao. Tsy fampiadiana finoana sanatria, fa rehefa nekena kosa fa atao andro fety tsy iasana, fa andraisana karama, dia tokony hajaina arak'izay. Tafandria mandry e.Patrick
Nanao Filankevitry ny Minisitra manokana ny Filoha Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny visioconférence, izay nandraisan'ny Praiminisitra anjara sy ireo minisitra vitsivitsy. Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, dia notendrena ho lehiben'ny Etamazaorin'ireo Tafika, Chef de l'etat major des Armées, ny Général de Division SAHIVELO Lala Monja Delphin. Ny Filoha Rajoelina moa dia any Frantsa ankehitriny hanatrika ny confirmation -njanany vavy, ary mody an-tanindrazana ny alahady izao. Tafandria mandry e.Patrick
mercredi, 16 juin 2021 22:49
Nitsindrona vaksiny ve izany ny Filoha ?
Lasa any Frantsa omaly talata ny Filoha Andry Rajoelina. Nanambara anefa ny Masoivoho frantsay monina eto Madagasikara fa tsy misokatra ho an'ireo tsy vita vaksiny ankoatr'ireo efa vaksiny neken'ny Vondrona Eoropeanina ireo olona tonga hiditra ny sisintany frantsay. Ary nosinganiny manokana ny hoe tsy ekeny ny vaksiny Covishield, ka mipetraka izany ny fanontaniana hoe, nanao vaksiny ve izany ny Filoham-pirenena sy ireo mpiara-dia aminy, ka afaka niditra ny Lafrantsa, ary tsy ilay vaksiny nafarana natsindrona ny Malagasy ve izany no nampiasainy raha tsy eken'ny Frantsay io Covishield io. Bon matchPatrick Euro 202045:00Italie 1 - 0 Suisse
Passeport diplomatique vao nalaina ny 08 jona 2021 no nampiasaina. Nanainga io alina io AF935 tamin'ny 20h hiazo an'i CDG Paris. Ny tsiliantsofina moa dia hiasa amin'ny ambassade, ka asa izay tsy mahavoa rehetra io dia asisika any amin'ny placard n'ny ambassade any. Bon match France 1 - 0 Allemagne52:01 Patrick
Misy vola 25 miliara ariary andoavana trosan'ireo mpandraharaha namita ny fotodrafitrasam-panjakana, raha ny feo heno dia ireo nanao fotodrafitrasa momba ny fahasalamana sy ny fampianarana no omena. Ny trosa anefa amin'arivony miliara ariary tsy voaloa amin'ny asam-panjakana rehetra, iza no omena, iza no tsy omena ? Ny sora-bola amin'ny teti-bola misy, fa ny vola no tsy misy ao anaty kitapom-bolam-panjakana. Sa miandry digitalisation indray ireo làlana efa vita tsy voaloa vola? Tafandria mandry e.Patrick
mercredi, 02 juin 2021 20:10
Soa fa nalana
Nilaza moa izy fa afindra toerana hafa fa olon-kafa no adimby toerana azy eo amin'ny serasera présidence. Mbola mandeha ny Conseil des ministres isika miteny izao.Mbola tsy nivoaka ny décret manala na manolo ilay vaovao, dia efa izy no mipingapinga milaza ny asolo azy. Angaha izy no misolo toerana ny Conseil no avy dia hilaza izay voatendry eo. Te hitondra tenin'ny fiadidiana ny Repoblika alohan'ny tompony ?Izy ilaza ny tenany hiala moa ve hisy anakana izany, satria ny azy no ataony tonga aloha. Aiza no hisy ilaza fa "CON" ireo 6% mpanao facebook. Soa fa nakisaka e, diovy Président ireo manodidina anao fa katakata montraka.Mbola maro ireo tokony akisaka fa mandoto rano. Tafandria mandry ePatrick
Amin'ny afara mba zanatany alainareo anamboatra tragno, maro mahay miasa tragno mpiasa aty, fa Mahajanga mafana 35°c no anaovanareo tragno karaha prison tsy misy fenêtre devant. Mba mangalaha honondraha edy anao Président fa katakata montraka kony omendreo mpiara-miasa aminao reo ein, na taha soratra jiaby io diso. Sary mampiaingo lakilasy ataovy sary zaza gasy, fa tsy sary zana-bazaha. Tsy aleo atao teny gasy EPP ireny, zaza gasy aby anie mianatra ao, tsy misy vazaha ao ndray raiky. Manodidina jiaby hatramin'ny WC mbola lékôly aby anaran'io, fa tsy trano io to. Rehefa te hanao raha manara-penitra izany dia ataovy arak'izay marina, jusqu'amin'ny lakoro hisoman'ny zaza reo. Aza adigna président fa mpampianatra sy programam-mpampianarana no sekoly voalohany ein, tsara ny misy trano orange, fa aza atao matsiko ny mpampiatra sy ny programa. Za ndraiky misaotra anao fa miasa anao, fa olonao tsy mamango ein, aiko nisy ministre nahazo note d'évaluation 04/20 fa mbo nitananao fo. Bonne nuit atsika jiabyPatrick
lundi, 31 mai 2021 21:17
Nakatona ny birao fananan-tany sy fandrefesan-tany Toliara fa hitsena minisitry ny aménagement
Zoma 28 mey lasa teo lay raha, na service minimum tsy nisy fa dia nakatona tsotra izao ny birao iray manontolo fa ho avy minisitra ka mila tsenaina. Tafandria mandry ePatrick
dimanche, 30 mai 2021 22:05
Mety ireny fepetra noraisina ireny
Ara-potoana ny kabary, na dia angatahana atao amin'ny andro atoandro aza izany. Ny fiainam-pirenena tsy atao andro alina lava, sady mba hiomanana mialoha. Mety ny fepetra noraisina mahakasika ny hamehana ara-pahasalamana, na dia zoma aza vao misokatra ny fitaterana nasionaly sy rejionaly nefa ny sekoly, indrindra ny oniversité efa misokatra ny alarobia, betsaka ireo mpianatra mbola tavela any amin'ny faritra, fa tsy hoe dia tara be koa anefa izay. Mila hatrehina amin'izay ny fanarenana ny toe-karena, fa afaka ny krizy ara-pahasalamana dia hiditra ny krizy ekonomika sy sosialy. Tsara ny antso fampiraisana, fa aoka samy ahitsy fo arak'izay tokoa, ary dia ataovy any aoriana ireo mpiara-miasa manodidina izay mihantsy ady sy tsy mitondra tena toy ny mpitondra fa lasa manao ady an-tsena fotsiny. Tafandria mandry e.Patrick
vendredi, 28 mai 2021 22:41
Madagasikara politique endémique
Ny mpitondra no mamolavola sy manolotra tolo-dalana ho an'ny mpanohitra azy. Izy rahateo no maro an'isa amin'ny maha mpitondra azy, dia izy koa no mandany ny lalàna ho an'ireo mpanohitra azy. Azo antoka rehefa lasa mpanohitra indray izy any aoriana, dia tsy mety aminy indray io lalàna notapahany io. Tafandria mandry e.Patrick